बारेमा - Cloud Library
गृहपृष्ठ - बारेमा
क्लाउड पुस्तकालय बारेमा
यी स्रोतहरू आर्थिक र भौगोलिक स्थितिको बावजुद पाष्टरहरू र अगुवाहरुलाई उपलब्ध गराउने मेसन्जर इन्टरनेशनलको समर्पित उद्देश्य छ । यही उद्देश्यको लागि द क्लाउड पुस्तकालयको सृजना भएको थियो । यसले एक अन्तराष्ट्रिय वितरण केन्द्रको रुपमा सेवा गर्छ जसले यी उल्था गरिएका सामग्रीहरू खुल्ला रुपमा प्रवाह गर्न र डाउनलोड गर्न दिन्छ ।
यी स्रोतहरुलाई हरेक प्रमुख भाषामा तयार गर्र्नेे र संसारको ९८ प्रतिशत जनसंख्याकहा“ पु¥याउने हाम्रो उद्देश्य छ । क्लाउड पुस्तकालय यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने एक मार्ग हो । तपाई सोध्नुु होला, किन? किनभने, वर्चूअल स्रोतहरु भौतिक सामाग्रीभन्दा धेरै छिटो वृद्धि हुन र यात्रा गर्न सक्छन् । हामी आशा गर्छौ कि क्लाउडको अनुभवको मजा तपाईले लिनु हुनेछ ।
येशूले हामीलाई सूसमाचार सुनाउनको निम्ति मात्र होइन, तर चेलाहरु बनाउ“नको निम्ति पनि आज्ञा दिनुभयो । यी सन्देशहरूले तपाईलाई येशूका चेला बन्न सहायता गर्छन् । हामी तपाईमा लगानी गरिरहेका छौं किनभने हामी तपाई र तपाईका क्षमतामा बिश्वास गर्छौै कि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा तपाईले तपाईको प्र्रभावको संंसार परिवर्तन गर्नु हुनेछ । परमेश्वरले तपाई भित्र महानता राख्नुभएको छ, र उहा“ले तपाईलाई गहिरो रुपले जान्ने तृष्णा गर्नुहुन्छ । यी स्रोतहरूले तपाईलाई परमेश्वरस“गकोे एक निकट, व्यक्तिगत सम्बन्ध थाहा गर्न सहायता गर्छन् । जसै तपाई परमेश्वरस“गको तपाईको सम्बन्धमा बढ्नुहुन्छ, उहा“को वचनको शक्तिद्वारा तपाई परिवर्तन हुनुहुनेछ ।
परमेश्वरले तपाईलाई एक उद्देश्य राखेर सृष्टि गर्नुभयो जो तपाईका वरदानहरू र प्रभावमा बिशेष छ । तपाईका निम्ति परमेश्वरस“ग भएका सबै कुराको पुर्णता खोज्न हामी तपाईलाई उत्साह दिन्छौं । हामी प्रार्थना गर्दछौं कि तपाईको खोजको यात्रामा यी सामाग्रीहरूले तपाईलाई सुसज्जित गर्नेछन् ।
तपाई र तपाईकाहरूमाथि आशिष् रहोस् ।
जोन र लिसा बिभर
दर्शनलाई सहयोग गर्नुहोस्
के यी जीवन परिवर्तन गर्ने सामाग्रीहरू संसारभर वितरण भएको हेर्ने तिब्र चाह“ना तपाईमा छ ? यदि तपाई क्लाउड पुस्तकालयको उद्देश्यलाई सहायता गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ भने, कृपया इमेल getinvolved@cloudlibrary.org गर्नुहोस्ः नभतष्लखयखिभम २ अयिगमष्दिचबचथ। यचन। तपाईको प्रार्थना र सहायताको लागि अग्रीम धन्यवाद !